Laptop ဘက်ထရီ ကုန်မကုန် ကြိုတင်သိချင်တဲ့သူများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Laptop ဘက်ထရီ ကုန်မကုန် ကြိုတင်သိချင်တဲ့သူများအတွက်
Laptop ဘက်ထရီ ကုန်မကုန် ကြိုတင်သိချင်တဲ့သူများအတွက်
Posted by manawphyulay on Feb 20, 2012 in Computers & Technology, Software & Links | 10 comments
Laptop သုံးသူများအတွက် ဘက်ခရီစွမ်းအင် ဘယ်လောက်ရှိနေသေးတယ်။ ကုန်ခါနီးပြီ စတာတွေကို အလွယ်သိနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ရှိပါတယ်။ တ်စခါတလေ ဘက်ထရီ အားမသွင်းပဲ သုံးနေရင်းနဲ့ အရေးကြီး စာဖိုင်များ မသိမ်းခင် Laptop ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ကြိုတင်သိနိုင်မယ့် နည်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
Power Meter Plus ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Matt Collinge, Copyright 2003 (www.mattcollinge.co.uk) မှ ထုတ်လုပ်တဲ့ Power Meter Plus v.1.6.1 ဆော့ဖ်ဝဲဟာ screen မှာ ဆလင်းဒါလိုပုံနဲ့ ဘက်ထရီအား ဘယ်လောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ပြပေးပါတယ်။ Toolbar(ညာဘက်အစွန်)က icon ကို မောက်စ်နဲ့ ထောက်ကြည့်ရင်လည်း Laptop ကို ဘက်ထရီပါဝါနဲ့ ဘယ်နှနာဂီ သုံးနိုင်သေးတယ်၊ ပါဝါရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ဆိုတာ ပြပါတယ်။ နောက် ဘက်ထရီပါဝါ ၈ ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင် သတိပေးစာပေါ်လာပြီး ၇ ရာခိုင်နှုန်း လက်ကျန်မှာတော့ ကွန်ပျူတာကို Hibernate နဲ့ ပတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိုင်အရွယ်အစား 135KB ရှိပြီး အခမဲ့ download ချယူသုံးနိုင်ပါတယ်။
Battery Care ကတော့
ဘက်ထရီရဲ့ အခြေအနေနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်း (capacity) ကို ပြပေးပြီး အချိန် ဘယ်လောက်ကြာ သုံးနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ ဘက်ထရီသာမက CPU နဲ့ hard disk drives တို့ရဲ့ အပူချိန်ကိုလည်း ပြပေးနိုင်ပါတယ်။
Battery Alarm ကိုတော့ Laptop က ဘက်ထရီကို အကာအကွယ်ပြုပေးဖို့ရာ ဒီဇိုင်းထုတ် ရေးသားထားပါတယ်။ ဘက်ထရီကို ကြာရှည်စွာ သုံးနိုင်အောင် အထောက်အကူပြုပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ copyright 2009 pwqsoft(website: http://www.pwqsoft.com) မှ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Laptop အသစ်တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းကို စတင်စစ်ဆေးဖို့ရာ Imtec Battery Mark (Tester) ကို တင်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Notebook, Laptop ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ဘက်ထရီကို ဘယ်နှနာရီ သူုံးနိုင်တယ်။ ဘယ်လောက်သက်တမ်း (battery life) ရှိတယ်ဆိုတာ ပိုပိုကဲကဲ ကြေညာတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Imtec Battery Mark ကို သုံးပြီး အရင်ဆုံး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Imtec Battery Marker ကို ရုရှားကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ပြီး အခမဲ့ download ချယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီကို စစ်ဆေးပေးတဲ့ Test Tool လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘက်ထရီဗို့ကို ဂရပ်နဲ့ Excel မှာ ဒါမှမဟုတ် ပုံအနေနဲ့ ပြပေးပါတယ်။ အခြားအချက်အလက်များလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Laptop Battery Tester software (http://download.cnet.com/Laptop-Battery-Tester/3000-20944-1046852.html#ixzz1ftgN93or) မှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပြင်ဆိုင်အများစုကတော့ Laptop battery capacity test ကိရိယာကို သုံးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ USB port နဲ့ တပ်ဆင်သုံးနိုင်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲလည်း ပါဝင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ လေ့လာသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်ကသားသားစိန်ပေါက်ပေါက်ဆော့တဲ့ လက်တော့ကို စမ်းကြည့်လိုက်အုန်းမယ်
Laptop ကို ဘက်ထရီပါဝါနဲ့ ဘယ်နှနာဂီ သုံးနိုင်သေးတယ်၊
ဘက်ထွီ သေနေဘီ …
သေတော့ မြေမြှုပ်လိုက်တာပေါ့ ..အဟီး…
ပီး ပလပ်ထိုးပီး ဒက်စတွတ်လို သုံးနေတယ်…
လက်ပကျွတ်သမားများ ကို လက်တို့ချင်တာကတော့
၁ပါတ် ၁ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် ဘက်ထွီ ကို အားကုန်သွားတဲ့အထိ
ပလပ်ဖြုတ် သုံးသင့်ပါကြောင်း …သုံးနိုင်တဲ့ နာရီ (နာဂီမဟုတ်ပါ)
ကိုလည်း မှတ်ထားသင့်ပါကြောင်း ….။
တောက်လျောက် ပလပ်တပ်သုံးနေတဲ့ လက်ပကျွတ်တွေရဲ့
ဘက်ထွီ ဟာ ဘက်ထွီ တွင်း လျှပ်စစ် သိုလှောင်နိုင်စွမ်း လျော့ကျလာတတ်ပါကြောင်း
ဘက်တရီ အားကုန်ပီးပိတ်တဲ့ အထိလားဟင်?
လက်ပကျွတ်မှမဟုတ်.. ဆဲလ်ဖုန်းအပါအ၀င်… ဘက်ထရီသုံးတဲ့..အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအကုန်..လိုက်နာသင့်သည်ဖြစ်ပါကြောင်း……..
မှတ်ထားမယ်နော် မီးမီးချစ်ချစ်မှာလက်တော့ရှိတယ် သူပြန်လာမှ သူ့လက်တော့ကို ဒီနည်းအတိုင်း စမ်းသုံး ကြည့်မယ်…. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာသစ်တွေတိုးတာပေ့ါ ပို့စ်တင်ပေးတဲ့ မနောဖြူလေးကို ကျေးကျေးပါ…
အသုံးဝင်တဲ့ Knowledge လေးပါ … မနောရေ။ Thanks.
ဟုတ်ကဲ့ အမြဲတမ်း ဘက်ထရီကို လျှပ်စစ်နဲ့ အားသွင်းထားရင် ကောင်းပါသလား။ နတ်ဆိုိးလေးရဲ့ တော့တော့ က အမြဲဖွင့်ထားရလို့ပါ။